Igumbi elinefeni eGaya Junction Hotel Viraat Inn - I-Airbnb
Igumbi elinefeni eGaya Junction Hotel Viraat Inn
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguसागर
Eli ligumbi labucala le-non AC labantu ababini. KwiHotele viraat inn, sigxile ekuboneleleni ngeenkonzo ezizezona zikumgangatho ophezulu wokwaneliseka kwabathengi.Ngezinto ezahlukeneyo onokukhetha kuzo, siqinisekile ukuba uya kuvuya ukusebenza kunye nokuhlala nathi. IHotele iViraat Inn ifumene amanqaku ngaphezulu kwezinye ekuboneleleni ngeenkonzo zobubele kubakhenkethi bamazwe ngamazwe nabasekhaya. Ihotele yongeze amagumbi amatsha akumgangatho ophezulu adityaniswe nazo zonke izinto zale mihla
Indawo engeyiyo ye-AC enegumbi lokuhlambela elincanyathiselweyo, i-fan, i-tv, i-wifi, ifanitshala, amanzi acocekileyo e-RO, kunye nefasilithi ye-elevator ekufutshane kakhulu nesikhululo sikaloliwe sase-gaya.
IHotele iViraat Inn ikufuphi kakhulu neSikhululo sikaLoliwe saseGaya(enokuhanjwa).Inani elilungileyo leendawo zokutyela, iivenkile zonyango, iivenkile eziluncedo, ukhenketho kunye nohambo zikufuphi.Isibhedlele sikarhulumente esikufutshane yiJay Prakash Narayan Hospital(1km).
Andihlali kwipropathi.Nangona kunjalo xa kufuneka ndihlala ndifumaneka kwiselfowuni yam kwaye ngokobuqu ukuba kuyimfuneko.